थारु समुदायमा जितिया पर्वको महिमा
जितिया पर्वको उपलक्षमा हार्दिक शुभकामना !
(जितिया पर्वको उपलक्ष्यमा थारु समुदायबाट प्रस्तुत यो लेखलाई जस्ताको तस्तै पेश गरेकीछु)- झ्वानि, चितवन
नेपाल बहुभाषिक बहु संस्कृतिक परम्परा ज्ञान तथा सीपले भरिपुर्ण भएको देश हो । जसमा दक्षिण भागमा पर्ने तराई केवल अन्नको भण्डारले मात्र नभएर मौलिक मानब समाज भिन्न भिन्नपरम्प।ा भाषा र अमूल्य सास्कृतिक आदिले पनि सजिसजाउ छ । अर्को तर्फ पबित्र तिर्थस्थलहरुको मनोरम भूमिको रुपमा परिचीत चितवन जिल्ला लगाएत अधिराज्यमा पर्ने प्राकृतिक सौन्दर्य हिमाल, पहाड, नदीनाला, ताल तलैया द्धारा संरचित दृश्यले भरिभराउ रहेको यस स्थानमा विभिन्न देवी देवताहरुको वासस्थानको रुपमा रहेको पाइन्छ । जसमध्ये आदिमकाल देखि नै तराईको निश्चित भू भागमा आफ्नो छुट्टै सास्कृतिक पहिचान अन्य जातिको भन्दा नितान्त फरक र अतुलनिय छ, भनिन्छ सास्कृतिक तथा परम्परा मानिस सधै अधुरो र अपुरो हुन्छ । सास्कृतिक परम्परा नै मानव अस्तित्व हो । वास्तवमा सास्कृतिक परम्परा र रितिरिवाजमा जातित्वको पहिचान र इतिहास लुकेको हुन्छ । ती अनेक रितिरिवाज परम्परा र प्रकृतिक मनोरम रुपमा जीवित राखेको हुन्छ । जब यहाँ भदौ, असोज महिनाको आगमन भएपछि नेपालीहरुको घर आँगनमा खुशीको बहार बोकी ल्याउने चाडपर्वहरु पनि आउने क्रम शुरु हुन्छ । यसरी ती अनेक रितिरिवाज परम्परा सास्कृतिलाई जीवित राख्न चाडपर्वहरु महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको हुन्छ ।
थारु समाजमा तीज सँग समिप्य राख्ने महिलाहरुको महान् चाडपर्व जितिया पावनी पनि एक हो । प्रत्येक वर्ष असोज महिनाको कृष्णपक्षको तिथीमा पर्ने जितिया पावनी थारु समुदायको विशष गरी नारीहरुले तीन दिन सम्म मनाउने प्रमुख चाड हो । चितवन लगाएत तराईको विभिन्न भूभागहरुमा महिलाहरुले यस चाडलाई लहाके खाइ (दर खाने) उपास (उपवास) र पारन (अन्तिम दिन) सम्म उल्लसमय वातावरणमा धुमधाम सँग मनाइन्छ । जितिया पावनी पहिलो दिन महिलाहरु बिहान नजिकको खोलानालामा गई नुहाई धुवाई गरी व्रत बस्ने र नँया कपडामा सजिएर थारु भषामा गीत गाँउदै झम्टा नाँचमा रमाउछन् । जितियाको दोस्रो दिन (उपासको दिन) पुन नुहाई धुवाई गरी व्रत बसेर झम्टा नाचमा दिनभर रमाउने गर्छन् । बेलुका गाँउको कुनै एक जमिन्दारको घरमा सबै व्रतालु महिलाहरु भेला भई जीतवहानको कथा सुन्ने गर्दछन् । जितिया पावनीमा सुर्य भगवान्का पुत्र जीतवहानलाई देवताको रुपमा पूजा गरिन्छ । जीतको अर्थ विजय र वहानको अर्थ सर्वश्रेष्ठ भन्ने बुझिन्छ । विजयको प्रतिक मानिएको हुनाले यस पर्वलाई जितिया पावनी भनिएको हो । यो पर्व पौराणिक एवं लोक कथामा आधारित एक नारी प्रधान पर्व हो । कथामा व्यक्त गरिएको कुरा अनुसार धेरै वर्ष पहिले एउटा राज्यमा बस्ने मसुवासी भन्ने अविवहित बुढीले कोखवाट एक छोराको जन्म भएको थियो र समय बित्दै गएपछि हुर्केर त्यो बालक साथीहरु सँग खेल्न जान सक्ने भयो त्यो बालक आफ्नो छरछिमेक लगाएत धेरै टाढा टाढा सम्म गई प्रतिस्र्पधा गर्ने र प्रतिस्र्पधामा सबैलाई जित्ने पनि गर्दथ्यो । तर उनको यो जीतलाई अरुले मन पराएन र सबैले उनलाई कुटपिट गरी बिना बाउको छोरा भनी अपमान गर्दथे साच्चै आफ्नो बुवा को हो ? भनी थाहा थिएन ? आफ्ने बुवा पत्ता लगाउन आमाले बताए अनुसार उनी सुर्य भगवानलाई भेट्न जाने क्रममा बाटोमा विभिन्न समस्या परेकाहरुलाई मुक्त दिलाउन गाठो पार्दै भट्न जान्छ । एक दिन सुर्य भगवान् अर्थात आफ्नो पितालाई भेटेरै फर्किन्छ र घर फर्किने क्रममा लिएर आएको समस्यामा परेकाहरुलाई उदार गर्दै आउछ । यसरी उनले अरुलाई उपकार गरेको हुनाले सोही दिन देखी लोकले उनलाई पुज्न थाले । यसै सन्र्दभमा एउटा प्रचलित कथन अनुसार “सुर्य भगवानले आफ्नो पुत्र जीतवहानलाई आशिरबाद दिदा अब देखी तिम्रो नाम जीतवहान हुन्छ यही नाउँमा जुन महिला तिम्रो व्रत बसी स्वच्छ मनले पूजापाठ गर्छे त्यो नारीको इच्छा पूरा हुन्छ पति र बालबच्चा चिरञ्जीवी र पराक्रम हुन्छ” भनेर भनेका थिए भन्ने गरिन्छ । सोही समय देखि जितिया पावनीमा जीतबहानको नाँउमा व्रत बस्ने एंव पूजा गर्ने गरिएको हो भन्ने र्पूवजहरु (बुढापाकाहरुको) भनाई छ ।
यस्तै थारु समुदायमा विशेष गरी महिला व्रतालुले यो पर्व आउन केहि दिन अघि देखि नै घर वरिपरि सफा राने र घर लिपपोत गरी पवित्र राख्ने गरिन्छ । साथै पराई घर गएका चेलीवेटीहरुलाई माइत बोलाइन्छ । जितियाको पहिलो दिन अर्थात सप्तमीको दिन महिलाहरु विहानै उठेर नजिकैको नदी खोलामा गई नुहाईधुवाई गरी टाउको सफा गर्नको लगि पिना पातमा राखी चिल र स्याल दिदीबहिनीलाई भनेर पानीमा बगाई दिने गर्दछन् । यस दिन नुहाएर चोखो खाना खाने भएकाले यस दिनलाई लाहाके खाई भनिन्छ । वर पिपलको फेदमा गई वा हागा गाडेर स्याल र चिलको मुर्ति बनाएर त्यसमा पूजा गरी जल चढाउने गरिन्छ । यसै दिन देखि व्रत बसी व्रतालु महिलाहरुले बेलुका आफै पकाई चोखो खाना खान्छन् तर मासको दाल, माछा, मासु, जाउ र रक्सी जस्ता पदार्थका साथै अन्य जुठ्ठो खाने कुरा खान पूर्ण मनाही हुन्छ । कसैकसैले त एक छाक मात्र खाई ३ दिन सम्म व्रत बस्ने गरेको पाइन्छ । यस व्रतलाई खर जितिया भनिन्छ । जसको सन्तान नजन्मिदा बालबच्चाको लागि भएपनि पानी मात्र खाई यो व्रत बसेको पाइन्छ । त्यसै रात कुखुराको भाले बास्नु भन्दा अगाडि नै व्रतालु महिलाहरुले अन्दीको चामल पकाइ दठकट (दर) खाने गर्दछन् र त्यस पछि सबै महिलाहरु एकै ठाँउमा बसेर गीत गाउँने गरिन्छ । यस्तो बसेर गाँउने गीतलाई बदहा गाएको भनिन्छ । जस अन्र्तगत गाउँने गीतको झलक यहाँ प्रस्तुत छ स्(
ड्ड कारी डाटी तुलसी हरीएर पाते (याए हे रे महादेउले हुना विचारे)( २
ड्ड धममी कहे रे आहे रे तुलसी जरी पुरी दे वो पापी कहेरी याहेरे तुलसी जरी कोडी देवो याए हे रे महादेव
ड्ड तुलसीको चरिरीवरी फुलवाजे रोपे( २
फुलवाज चरिरीवरी वेरवाजे लगाओ ¥याए हे रे
ड्ड कौने मोरी यानीरी दिहे केरावा के भारे
हरे कौने मोरी यानीरी दिहे केरावा क भरे
कौने मोरी यानीरी दिहे दहीयाक भारे ¥याए हे रे
ड्ड कौने मोरी नित दिन यइहे याए हे
कौने मोर कहे झिनी बरु यइहे
ड्ड वावा मोर कहे जरामा नित दिन यइहे
भइया मोर कहे झिन बरु यइहे
यसरी भगवान् प्रति आस्था राखी गीत गाउँदै विहान सुर्योदय सँगै दोस्रो दिन अष्टमीको दिन खोलानदीमा गई नुहाई धुवाई गरी वेलपाती (वेलपत्र) टिप्छन् । यस दिन व्रत बस्ने महिलाहरुले पानी सम्म नखाई उपास (उपवास) बसी नँया नँया कपडामा सजिएर दिन भरी झम्टा नाचमा त्यसरी नाच गाँउदै रहस्यमयले भावपूर्ण गीत गाएन थाल्छन् ।
गीतको झलक छोटकरीमा प्रस्तुत छ स्(
ड्ड देवता धमकी गेल बिजुली चमकी गल री –अकिए हो ब रिस हो देवा मुसुराक धार)(२
ड्ड जउसमामी जइबेरे केचुल पूर्विबनिजीयारी –आकिए हो यानिरी दिहे चोलिया सनेस) (२
ड्ड जऊ जुग जिव बोरी भनी पलटीधर (एअबिरी) २ आकिए हो यानिरी दिवे चोलिया सनेसवारी अकिया हो मोर लेखे फटही पुरान
ड्ड जौ स्वामी जइवे उतरे बनिजिया एकिया हो मानीरी दिहे चोलिया सनेसवा
ड्ड जौ जुग बिवोरी धनी पलटिघर एअबो एकिया हो यानीरी देबो चोटीया सनेसवा
ड्ड यान केत यानले रे स्वामी चोटीया सनेसवा री याकिया हो मोर री स्वमी चोटीया रे सेवारे
ड्ड जौ स्वामी जइबे पछिया बनिजियारी एकिया हो यानिरी दिहे कजलाले सनेसवा
ड्ड जौजुग जिवबोरी धनी पलटिघर एइबारी एकीया हो यानिरी देवो कजला सनेसवा
ड्ड यान केत यानले रे स्वामी कजला सनेसवारी याकिया हो मोररी लेखे करकी मटीया
ड्ड जौ स्वामी जै वो दखिने बनि जियारी एकिया हो यानिरी दि हे सिनुरा सनेसव
ड्ड जौ जुग जिव बोरी धनी पलटि एइबोरी एकिया हो यानिरी देवो सिनुरा सनेसव
ड्ड यानके यनलेरे स्वामी सिनुरा सनेसवारी एकिया हे मोर लेखे ललकी मटिया
यस दिन खुीको दिन भएतपनि परिस्थितिले र्ममाहत गीत गाएर आफ्नो कर्मघरको दुःख पीडालाई सम्झन नारीलाई बाध्य तुल्याएको कुरा व्यक्त गरिएको पाइन्छ । विशेष गरी यस दिन महिलाहरुले सामुहिक रुपमा मार्मिक एंव कारुणिक भावनाको झम्टा गीत गाँउछन् । बेलुकीपख सबै महिलाहरु आफ्नो गाँउको व्राम्हथानमा गई पूजा आजा गरी वर पिपल र पाकडीको हागा अविवाहीत केटा मान्छेहरु बाट कटाउने गरिन्छ । यसरी हागा अविवाहीत कन्याहरुलाई बोकाइ व्राम्हथान देखी सम्पूर्ण महिलाहरु बिस्तारै हिड्दै गीत गाँउदै आउने चलन छ । गीतको झलक यहाँ प्रस्तुत छस्(
ड्ड राङ्गी चाङ्गी गेली हे बाटी साठी विडवा (रि सबरी चलल कुइ पनि घटरी ननदी)( २
ड्ड खोङ्गनट घैली खरकही विडवा री सवरी (रि सवरी चलल कुइ पनि घटरी ननदी) (२
ड्ड ओअहु सैयाउटी चली भैगेले सवारी री लगर वहर भेल ढाड री सवरी..................
ड्ड ओ अहु सैयाउटी चली भैगेले सवारी दो पटीन बाटे भौगोल ठाउे रे सवरी चल कुइ पनि......
ड्ड ओअहु सैयाउटी चली भैगेले सवारी री सखै पिपर भैगेल डाडे री सवरी चलल कुई पनि.......
ड्ड ओअहु सैयाउटी चली भैगेले सवारी री सवरी री कुइके जगती भैगेल ठाडे री सवरी
ड्ड घैली त धरली राम कुइके जगतीया री खुटवाहो विड चलाई री नन्दी...............
यसरी सामुहिक रुपमा गीत गाँउदै आफ्नो दुःख पिडा लुकाई उक्त हाँगा बेलुका जमिन्दारको घरमा कथा सुन्नका लागि आँगन गोबरले लिपपोत गरी बिचमा पर पिपल अथवा पाकडीको हाँगा गाड्न साथ साथै हाँगामा चराको (चिलको गुँड) जस्तो बनाएर र गुँडमा हान्ने सानो बासको धनुषवाण पनि झुन्डाउने गरिन्छ । त्यसपछि सबै व्रतालु महिलाहरु हाँगा गाडेको ठाँउलाई केन्द« मानि त्यसको चारै तिर गोलकारमा बसी सबै महिलाहरु जीतवहानको कथा सुन्ने र फरहार (फलफुल मात्र खाने) गर्दछन् । तेस्रो दिन तथा अन्तिम दिन पुनःखोलानदिमा गई नुहाइधुवाई गरी सुर्य भगवानको स्मरण गर्दै जीतवहानको सम्झनामा माटोको मूर्ति (गुरुगाङ्) बनाइ त्यसमा सिन्दुर, टिका, गाजल लगाई बेलपत्रले छोपी जकुर (भिजाएको मास) छर्केर पूजा गर्ने गरिन्छ । सूर्य भगवान लाई जल चढाई आशिष माग्ने र बेलुका कथा सुनेको वर पिपलको हाँगा र फूलपातीलाई सँगसँगै बगाउने गरिन्छ । यसलाई फलालोरे भनिन्छ । त्यपछि घर फर्केपछि धूपवाली केरा चिउरा र दुध मुछेर खाने र अघिल्लो दिन भिजाएर राखिएको मास भुटेर खाने चलन छ । यस चाड पर्वको मुख्य विशेषता भनेको नै केरा चिउरा खानु पनि हो ।
यस चाडलाई थारु समाजमा मनाउनुको आफ्नै महत्व रहेको पाइन्छ ।व्रत बसेमा घर परिवार बालबच्चा र पतिको जीवन सुखमय हुन्छ । इच्छाएको काम पूरा हुन्छ अन्न बाली राम्रो हुन्छ, पानीको मूल कहिल्यौ सुक्दैन र अविवाहितले राम्रो बर पाउछनर भने जनविश्वास रहेको पाइन्छ । यसै कारणले थारु समुदायका महिलाहरुले जितिया पावनी विशेष रुपमा मनाउने गरेको हो । यसरी यस चाडपर्व बाट हामीले धेरै नैतिक उपदेशहरु पाउन सक्छौ र घर परिवार दिदी बहिनी एंव माइती र चेली बीचको सम्बन्धलाई कायम राख्ने गर्दछ । त्यसैले हामीले हाम्रा यी अमूल्य गहना रुपी चाडलाई र्बिसनु हुदैन । बरु यस्तो धरोहरहरुलाई सरक्षण गर्नु हाम्रो कर्तव्य हुन आउछ ।